ကောင်းကင်ကို: ဘာသာမဲ့တယောက် ရှိခိုးတဲ့အခါ
ကျွန်တော်လည်း ဆရာတော်တွေကို စိတ်ထဲ
ကကို ရိုရိုသေသေနဲ့ ရှိခိုးပါတယ်...၊ဆရာတော်တွေရဲ့
ဘော... တူတယ်ဗျ...။အပျော်သဘော ဆိုတာကိုတော့
တာကို ကိုယ်က အဲ့လိုထုတ်ပြောလိုက်တော့ စိတ်ကွက်
မှာ မစိုးရိမ်ဘူးလား...၊ဆိုလိုတာက ဗျာ ကိုယ့်စိတ်ထဲထား
တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်...၊မလိုအပ်ပဲ တခြားလူမှု
At my young age, i pray Buddhism becoz of my family's religion and fear. Later, i read, analyze, and believe in that was scientific. Later, i realised i became Atheist. But, my behavior is the same as you wrote, except church.
I heard and read Buddhism book and quote, "Believe Nothing no matter where you read it or who had said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense."
I think you became Atheist - due to you believe in Science.
Now, I proud to say, "I amabuddhist".
p.s. I don't believe in Past and Future life. I don't believe in others .... because i have no experience in it.
If there isalaw that it don't believe in future life - u can't be Buddhist, so i will be Atheist.
ကောင်းကင်ကိုရဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်ပြီးတိုင်း များသောအားဖြင့်လိုက်မဖော်ဆောင်နိုင်ရင်တောင်မှခံစားမျှဝေလက်ခံတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးလေးကိုတော့.. *ဘယ်ဘုရားကိုမှလက်မခံဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်လို့ထင်ရတယ်... အဲ့ဒီတော့ သင့်ကိုသင် I am God လို့ ဆိုလိုရာရောက်တယ်... ဒီတော့ဖြင့်.. အဲဒီဆောင်းပါးလေးရဲ့ဆိုလိုရင်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ပေးချင်ပါတယ်.... you are not God ပေါ့... ဒီလိုဆိုတော့... သင်သည် "ဘုရားအားလုံးကို ယုံကြည်လက်ခံသူပါ"
winnlatt ko said...
ဘုရား ရှိခိုးတာ မရှိခိုးတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး ထင်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ရပ်တခု မှန် တယ် မှားတယ်ဆိုတာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ မြင်သိကြားခဲ့လို့ ချီမွမ်းတာ ကဲ့ယဲ့တာသာအဖြေ တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
ဒီမယ်.. သူငယ်ချင်း.. တစ်ခုပဲမေးပါ့မယ်.. တကယ်လေ့လာပြီးပြီလား..လေ့လာနေပြီလား..တရားအရသာမသိသူအဖို့ သူငယ်ချင်းလိုပဲ ဖြစ်နေမှာပါ..
တရားအရသာကို နည်းနည်းလေးရိပ်မိတဲ့သူတောင် အင်မတန်ဝမ်းသာကြတာဗျ့.. နေပူပူခရီးခဲကြီးသွားနေတုန်းဗြုန်းဆို အရိပ်ကလေးအောက် နားရလို့ ပင်ပန်းမှုလေးနည်းနည်းပြေတာ သိတာနဲ့ ဒီနေရာဟာ ဧကန် ဆင်းရဲပျောက်တဲ့နေရာပဲလို့ သိသလိုပေါ့.. ပင်လယ်ရေ ငန်ကြောင်းသိဖို့အတွက် ကုန်အောင်သောက်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး.. လျှာလေးနဲ့တို့ရင်သိပါတယ်.. အခုလည်းတရားအရသာသိဖို့ အခြေခံလောက်တောင်မရှိတာကို သိရတော့အံ့သြပါရဲ့..
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်လာအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။အဲဒီ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ကလည်း လူတိုင်းကသာသုံးနှုံးပြောဆိုနေတာ ဘာတွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းလဲ။ဘယ်လိုလက္ခဏာရှိလဲ။ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမှာလဲဆိုတာကိုတော့ ဘုရားဟော တရားတွေမလေ့လာပဲနဲ့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာတခု ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ငါကတော့ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ မနာလိုစိတ် ဝန်တိုစိတ်မရှိပါဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘုရားဟောထားတဲ့ မနာလိုခြင်းရဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်တည်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တည်ရာနေရာဝတ္ထု အဲဒါတွေကို ဖတ်ပြီးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်မှ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မနာလို ဝန်တိုမှု့တွေကို ဘွားခနဲ မြင်တွေ့လိုက်ရတာပါ။ တရားဆိုတာ ဘာသာတခုရဲ့ အနှစ်သာရပါ။ ပြီးတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေလေ့လာသင့်တဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ သိရင်သိသ လောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ ပညာရပ်တခုပါ။ တရားကို မမြင်ရင်တော့ ဘုရားဆိုတာလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တခု အကြံပေးခြင်တာကတော့ တရားကို ပညာတခုအနေနဲ့ လေ့လာကြည့်ပါ။ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဘုရားမရှိခိုးချင်လဲနေပါ။ တရားရဲ့ အနှစ်သာရကိုတော့ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
ကိုကောင်းရေ ဆရာကြီးတွေလား ဘာကြီးတွေလားတော့ သိဘူး ဒီနိုင်ငံမှာတော့ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်းကို အနာကြီး ရောဂါလိုရွံကြတယ် ပဒေသရာဇ်ခေတ်ရဲ့ အောက်သိုးသိုး အတွေးအခေါ်တွေရယ် လူတွင်ကြယ်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေရယ် ဆက်ကြိုးစား ကျွန်တော်တော့ ခင်ဗျားကို အားပေးနေမယ်